China ịkwanyere / WPC ụfụfụ Board Production Line Manufacturer na Supplier | Nọ na
Model NkeNSB: WPCFB-C80, WPCFB-C80 + 65
* Nke a na usoro nke ịkwanyere / WPC ụfụfụ Board Ndinam akara e maka ọkachamara eme PVC na WPC Panel na Board
PVCkwanyere / WPC ụfụfụ Board Production Line
Nke a ịkwanyere / WPC ụfụfụ Board Ndinam akara na-eji maka amị mma osisi maka kichin kabinet, ngwá ụlọ osisi, ụlọ ịwụ ahụ osisi, ụlọ template, mwube osisi, WPC ime ụlọ flooring mkpụrụ, billboard, na na.
Thefụfụ ụfụfụ bụ ụdị osisi PVC ụfụfụ ma ọ bụ WPC ụfụfụ osisi. Enwere laminated film ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na nke mbụ oyi akwa dị ka decorating elu.
na akwa njupụta PVC ụfụfụ ma ọ bụ WPC ụfụfụ osisi n'etiti, nke a họọrọ dị ka mkpụrụ iji wusi ike njide ya.
N'ihi ya magburu onwe isi ihe onwunwe arụmọrụ, na mgbakwunye na dị iche iche lamination ihe onwunwe na mgbanwe & ọgwa iche iche imewe nhọrọ, na osisi na-bụ-eji na ngwá ụlọ ụlọ ọrụ na a ọma dochie ngwaahịa ka omenala osisi osisi.
Enwere ike ịkpụ ya n'ụzọ siri ike, zọọ ya apịa, pịa ya ọkpọ, kpọọ ya, kpopu ya, kposara ya, kpọgide ya, gbajie ya ma ọ bụ kekọta ya ọnụ.
Ihe mgbakwunye nke ihe bụ ihe akaebe mmiri, na-eguzogide mmiri,
Nkọwapụta igwe & data teknụzụ:
The PVC WPC ụfụfụ osisi / n'ala mkpụrụ mmepụta akara na-emi esịnede extruder, ebu, ụfụfụ osisi ọnọdụ igwe, eke jụrụ usoro, traktọ, ọgbọ ọhụrụ nke nkenke nhazi akpaka ofu-ogologo ọnwụ igwe (ugboro akakabarede ọsọ akara), akpaka okokụre ngwaahịa orùrù ikpo okwu, na njem trolley
ọkpụrụkpụ: 2mm - 12mm
size: 970mm x 2000mm ma ọ bụ 1220x2440mm
* Ejirila igwe ejima ejiri na-emepụta ihe eji emepụta plastik, arụ ọrụ plastik dị elu nke ịgwakọta ihe, na-ekwe nkwa ncha plastik.
* na nnukwu ikike nke mmepụta, ka ọ dịgodị, ihe ahụ dịkwa mma.
* Karịsịa n'ihe banyere nkwụsi ike nke ọnya ụfụfụfụfụ, a na-anabata usoro njikwa akpaka pụrụ iche iji mee ka ịdị arọ nke bọọdụ ọ bụla dịkwuo ike.
* Ịmụta a pụrụ iche ájá na sawdust akpaka collection ngwaọrụ iji belata mmetọ nke dum akara nke ájá ka omumuihe, na-eduga na ụlọ ọrụ na-eme ka omumuihe gburugburu ebe obibi Cleaner.
* Nkenke ukpụhọde nke ọkpụrụkpụ nke mpempe akwụkwọ site elu àgwà uwe ogbe ụdị ebu isi.
* The ± 1 ℃ nkenke okpomọkụ akara maka plasticization usoro, ọkpụrụkpụ na-eji ire ụtọ elu.
* Ma ụzọ controll maka ọkpụrụkpụ nke mpempe akwụkwọ n'ụzọ ziri ezi site ukpụhọde ịghasa ma ọ bụ mmanụ mgbali.
* Ugboro abụọ akaghị jụrụ na ebu okpomọkụ njikwa na nakweere.
* Nkenke ọnwụ igwe n'ihi na-enye anụ na ezi ọnwụ nke ogologo.
Ihe Kwesịrị Ekwesị
Product Obosara (mm)
Production ntụgharị (KGS / awa)
+kwanyere + CaCO3 / ịkwanyere + osisi ntụ ntụ + CaCO3
Ikwanyere Iationomi marble mpempe akwụkwọ Product Layer
Akpa Layer Laminated ihe nkiri
Nke abụọ High njupụta PVC ụfụfụ
Nke atọ Filmchọ Mma nkiri
The ịkwanyere WPC ụfụfụ osisi mmepụta akara na-akpọ WPC flooring Ndinam / Plastic ngwá ụlọ osisi mmepụta akara / ụlọ template mmepụta akara, ewu osisi Ndinam akara.
Isi unit, plastic extruder, e mere nke Concial Ejima ịghasa plastic extruder na ike ntụ ntụ si.
Ejima ịghasa Plastic Extruder igwe bụkwa isi unit maka mmepụta akara nke na-amị PVC anwụrụ, ịkwanyere profaịlụ na wdg
Igwe igwe anyi nwere oke nloghachi na ulo oru mbo ma nwee ike ikwuputa onwe ha ngwa ngwa.
Dị ka a 20 afọ experence factory, anyị nwere ike inye ndị ahịa na keukwu oru suport na-akwado site na akụrụngwa usoro, mmepụta usoro ịkpụzi akụrụngwa.
Nke gara aga: PVC iitationomi marble mpempe akwụkwọ Production akara
Osote: EIR Online SPC Ft Production Line chọrọ ụdị
Obi dị anyị ụtọ ịnata ndụmọdụ gị n'onwe gị:
Ejima ịghasa Extruder Machine
EIR Online SPC Ft Production Line chọrọ ụdị
The Single ịghasa Extruder Machine
Ikwanyere Iomie Marble Profaịlụ Production Line
Wallkwanyere Wall N'uko Door oghere oghere Production Line
Prokwanyere Profaịlụ Production Line